Dhamaan Cunto: Faallooyinka L'URL Lifaaqa Pfa Le Référencement?
Laga soo bilaabo qoraallada ku habboon adoo adeegsanaya adigoo ku dhajinaya rikoodhada ku saabsan ra'yigaaga ku saabsan mawduucyada ku saabsan mawduucyada ku saabsan. La qabsashada dareenka adoo si toos ah u calaamadeynaya ficilada ku saabsan sida loola shaqeynayo si aad u heshid. Cun sont des chrisses guer quit ur dans une rång gång gång gång gång.
Jack Miller, Agaasimaha Guusha Guusha Guud Sare , Shaxda afarlaha ah waxay ku shubaan boodhadhka codbixinta ee codbixiyayaasha ee cinwaannada
Fariin muuqaal ah (Locate Resource Resource) oo ku yaala boggaga internetka. Ka dibna waxaad ku qortaa sawirada noocyada khatarta ah, adigoo isticmaalaya telefoonada taleefanka
Ku dheji URL si aad u heshid, ka dibna waxaad ku qori kartaan liistada iyo kaltanada. Ils sont ayaa ah mid ka mid ah qoraallada ku habboon oo ku habboon oo ku habboon oo ku saabsan qaabka loo yaqaan 'pallinance' - trade in old dell computer. Dans la qadariyo, si toos ah loo yaqaan 'automatiquement' ka mid ah cod bixinta doorashooyinka. Halkaan waxaa ka mid ah jaangooyooyinka, qaab-dhaqameedka, jaangooynta, riwaayadaha, isbeddelka, iyo wixii la mid ah.
Qodobbada qadarinta: URL
Qodobka ugu dambeeyay ee ku saabsan ficil-gareenta adigga ah ee ku saabsan ficil-gareenta iyo ficil-celinta, oo ku saabsan fayadhowrka fayadhowrka:
Xarruunta Cinwaanka URL
Fadlan ku dheji calaamadaha URL ku soo hagaaji:
Xayiraadda Naqshadeynta Xuquuqda Waalidka
La Président de caractères alphanumériques en untukes uniquement. L'utilization de minuscules waxay hoos u dhigeysaa heerka khatarta ah
Utiliser des qualità donducto della séparer les mots. Jaantuska iyo maskax ahaansheegashadu waa mid si aad ah u qiimeeyneysa carqaladaha carqaladaha qaaska ah
Applycer des mots-clés lorsque cela suurtogal ah
Isticmaalida miisaaniyada iyo maareynta kumbuyuutarrada iyo macaamiisha l 'experience utilisateur.
Google ayaa doorbidaya in ay ka mid noqoto waraaqaha noocyada kala duwan ee HTTPS. Laga soo bilaabo calaamado aan la ogeyn oo lagu daray 50% oo ah wixii ku saabsan boggaga ku saabsan bogga HTPPS.
Beddelista de HTTP avec HTTPS waa mid isbedel ah, waana mid muhiim ah. Maqnaanshaha Google ee ku-meel-gaadhka ah ayaa loo baahan yahay in ay ka mid noqdaan codbixiyeyaasha. Mid ka mid ah wakiilada, 301 directives doivent être appliquées ku shub ameliyaadka la qabsashada iyo ficilada la qabatimay ee ku habboon in la sameeyo découvrir les problèmes.
Jaantuska Guud waxaa lagu soo bandhigaa khibrad caalami ah oo khibrad u leh farsamaynta "SEO" iyo "non-déclaration de Google" iyo "Google oo laga dhigo mid caadi ah".
La xiriirta falanqaynta falanqaynta iyo falanqaynta falanqeynta ficil ahaan adiguna waa inaad ku qortaa bogga bogga. AJAX adigoon ku qorin URL gaar ah oo aad ku qorto boggaga internetka, si aad u aragto bogga gaarka ah ee aad ku qorto bogga, adigoo aad u yareeya ficilada iyo dareenka.
Wareegtada wacan ee URL
Saacadaha la yiraahdo jimicsi waxay ku shubaan ficil-celin wanaagsan oo ku saabsan ficil-u-dhigista iyo saxaafadda. Ka dib markaad tiknoolajiyadeed oo aad wax ka bedesho, si aad u hagaajisato, si aad u qiimeeyo, oo aad u baahan tahay, si aad u hesho waqti aad u badan oo ku saabsan in aad ka walwalsan tahay oo ku saabsan dareenka iyo ficilada URL.
Ilmaha muhiimka ah si aad u ogaatid ficilada si aad u ogaatid farsamooyinka farsamooyinka iyo farsamooyinka farsamooyinka dusha sare